भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, सर्वोच्चमा बहस चलिरहेकै बेला यस्तो घोषणा PM KP Oli. -
Home News भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, सर्वोच्चमा बहस चलिरहेकै बेला यस्तो घोषणा...
भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, सर्वोच्चमा बहस चलिरहेकै बेला यस्तो घोषणा PM KP Oli.
भर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, सर्वोच्चमा बहस चलिरहेकै बेला यस्तो घोषणा PM KP Oli
कवि विनोदविक्रम केसीको ‘जुलुस गइरहने मान्छे’ कविता अहिले चर्चामा छ । कविता पढ्दै गर्दा, सुन्दै गर्दा त्यो जुलुसमा म आफूलाई कवि केसीसँगै पाउँछु । काठमाडौं सहर अहिले जुलुसमय छ । माइतीघर चोकको दक्षिणपट्टिको कुनो जुलुस गर्ने स्थायी ठेगाना बनेको छ ।
विरोधका अनेक रंग र रूप देख्न पाइन्छ त्यहाँ । कहिले किसान, कहिले विद्यार्थी, कहिले अधिकारकर्मी र कहिले नाट्यकर्मी आएर उभिन्छन् त्यहाँ, अनि नारा लगाउँछन् मूर्दावाद–मूर्दावाद । कोही नाटकबाटै मूर्दावाद मञ्चन गर्छन्, कोही गायनबाट अनि कोही कविताबाट ।
माइतीघर चोकको कुनोमा बसेर लगाइएका अनेक शैलीका ती मूर्दावादका नारा सिंहदरबारको कानसम्म भने अझै पुग्न सकेको छैन । सिंहदरबारका झ्यालहरूमा बाक्लो कालो सिसा लगाइएको छ । त्यसैले बाहिर लगाइएका चर्का नारा ती सिसाभित्र पस्दैनन् । अग्ला पर्खालले घेरिएको सिंहदरबारभित्र हामीले नै चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू बस्छन् । सिंहदरबारबाहिर ती हाम्रा प्रतिनिधि भए पनि दरबारको अजंगको मूलद्वारभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै ती जनप्रतिनिधिबाट शासकमा परिणत हुन्छन् ।
अजबको वातावरण छ, सिंहदरबारभित्र । सिंहदरबारले नसुनेको आवाज सुनाउन बालुवाटार मार्च गरेका छन् नागरिक अगुवाहरूले । बालुवाटार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास । केही वर्षदेखि शक्ति केन्द्र बनेको छ बालुवाटार । वर्क फ्रम होमको अनुकरणीय उदाहरण हो, बालुवाटार । हाम्रा प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदैनन्, सम्पूर्ण काम घरबाटै गर्छन् । वर्क फ्रम होमले विश्वभरि नै कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको परिभाषा बदलेको छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले कोभिड प्रकोप सुरु हुनुभन्दा निकै वर्षअघिदेखि नै वर्क फ्रम होमको चलन चलाएका छन् ।
केसीसँगै हिँडिरहेको त्यो जुलुस नागरिकहरूको हो, जो आन्दोलित भएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध । बृहत् नागरिक आन्दोलनको तुल अघिअघि छ जुलुसको । पछि­पछि छातीमा, हातमा, निधारमा विरोधका आवाजहरू बोकेर लामबद्ध छन्, आन्दोलनका सहयात्री नागरिकहरू । जुलुसमा युवा छन्, प्रौढ छन्, सेतै कपाल फुलेका केही वृद्धहरू पनि छन् । ती लामबद्ध विभिन्न पेसाकर्मी नागरिकको जुलुसलाई सहर झ्यालबाट नियालिरहेको छ । आन्दोलनका उभार उठ्दा सहर यसरी नै आन्दोलनलाई नियाल्छ ।
Previous articleरबि लामिछाने पुगे भागीरथीलाई मारेको ठाउँमा | घटनाको पर्दाफास यसरी गर्दैछन हेर्नुहोस्
Next articleभागरथी आमालाई भेटेपछि भक्कानिए रबि लामिछाने | बाहिरीयो कारुणि भिडियो, दोषीलाई नछोड्ने Rabi Baitadi